मुख्यमन्त्रीले नै मान्दैनन् संविधान, गरे यस्ता गल्ती ! - Nepalese Times
बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या १०१ पुग्यो, कहाँ कति ? (विवरणसहित)5मिनेट अघि
माओवादीले तोक्यो ३२ विभागका प्रमुख, कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित)2घण्टा अघि
मुख्यमन्त्रीले नै मान्दैनन् संविधान, गरे यस्ता गल्ती !
नेप्लिज संवाददाता २५ आश्विन २०७८, सोमबार ०९:४३ (1 हप्ता अघि) १०८ जनाले पढ़िसके
विराटनगर । विधान बनाउनेले नै संविधानको कार्यान्वयन गर्न छाडेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य ।
संविधानसभाको मस्यौदा समितिमा रहेर विधान बनाएका आचार्यले आफैँले संविधान उलंघन गरेका छन् ।
३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसको ठाडो उलंघन गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई उनले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
विधान बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेले यस्तो हर्कत देखाउनु राम्रो नभएको विपक्षी गठबन्धनको भनाइ छ ।
विश्वासको मत चाहिएको प्रस्ताव संसद्‌मा पेस नै नगरी ५ कात्तिकसम्मका लागि प्रदेश बैठक स्थगित भएको छ । आज बसेको बैठकमा विपक्षी गठबन्धन दलका नेताहरूले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीप्रति कटाक्ष गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले संविधानलाई कुल्चिँदासमेत सभामुख मुक दर्शक मात्र भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले बताए ।
‘उहाँले मलाई अप्ठ्यारोमा नपारिदिनुहोस्, सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभएको छ’, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘तपाईंबाट संविधानको पालना हुनुपर्छ, त्यसमा विधानले के भन्छ, त्यही गर्नुहोस् । हामी सहजीकरण गर्न तयार छौँ भने पनि मुख्यमन्त्रीले दशैँमा मासु खाने योजना सुनाउनुभएको थियो । त्यही योजनालाई उहाँले पनि साथ दिएको देखियो ।’